မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Honeymoon to New Zealand (Day 8) - Out and about in Wellington
Posted by mabaydar at 5:38 PM
ဘောင်းဘီတိုနဲ့ စတိုင်က လန်းတယ် မဗေဒါး)
အမတစ်ယောက်ဆီမှာ US ပိုစ့်မြင်တော့ US သွားချင်တယ် မဗေဒါရဲ့ NZ ပိုစ့်မြင်တော့ NZ သွားချင်ပြန်ရော..
စောင့်နေမယ် မြန်မြန်ဆက်နော်..တစ်လတစ်ပုဒ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ တစ်ပတ်တစ်ပုဒ်လောက်ပေါ့ :D
12/30/2015 8:59 AM
စင်္ကာပူမှာနေတော့ အတိုအပြတ်က များတယ်လေ။ အနွေးထည်တောင် ထူထူထဲထဲဆိုလို့ အဲ့ တစ်ထည်ပဲရှိတာ။ ထပ်လဲ မ၀ယ်ချင်ဘူး ဒီမှာမှ မ၀တ်ဖြစ်တာ။ ဖတ်တဲ့သူအားပေးတဲ့သူ မရှိဘူးထင်ပြီး အားငယ်နေတာ။ နောက်တစ်ပုဒ် picton ကိုသွားတဲ့ သင်္ဘောအကြောင်း အတိုလေး နှစ်မကုန်ခင် အမြန်ရေးတင်ရင်ကောင်းမလားလို့။ ရေးကြည့်ပြီး အခြေအနေကြည့်လိုက်အုံးမယ်။
သွားချင်ရင် ငယ်တုန်း အခွင့်ရေးရှိတုန်းသွား။ အသက်ကြီးလာရင် အပင်ပန်းမခံနိုင်တော့ဘူး။
Day 8 ကိုဖတ်ရတာ ဒီနေ့အတွက် ပြည့်စုံသွားပြီ.. နောက်အပိုင်းတွေလည်း စောင့်မျှော်လျှက် ...
I always read your posts.It's all great.
Always waiting for the new posts,sis.
12/30/2015 7:42 PM
@TZN - ဘာတွေ ပြည့်စုံပြီး ဘာတွေ မပြည့်စုံသေးဘူးလဲ သိချင်တယ်။ အမြဲ အားပေးနေလို့ ကျေးဇူး
@anonymous - ညီမက Huang Glory MonTao လား? Thank you so much for your comment.
12/30/2015 8:27 PM
နှစ်ဒီနေ့ ကုန်မှာနော်...စောင့်နေတယ် ခစ်ခစ် :P
တကယ်..အတိုလေးနဲ့စတိုင်က လန်းတာ မဗေဒါနဲ့လိုက်တာယ်း)
ခရီးက သွားချင်တာ တပိုင်းသေနေတာပဲ အချိန်မရတာရယ် ကျောင်းစရိတ်ကုန်တာရယ်များနေတယ်..။ရှေ့နှစ်ထဲတော့ သွားဖြစ်အောင်သွားမှား)
Hi Ma Bay Dar ,
Hopefully you will continue about Queenstown and Milford Sound.
I love traveling like both of you. We gotalot of knowledge from you.
Fantastic. Always checking your blog.
2/08/2016 4:17 PM
Glad to know that someone is still waiting to read more of my travel post.
I will continue writing about that.
Have you read my Day9 Beginning post as well?